भुइँकुरा Archives - खबरम्यागजिन
February 2, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
भुइँकुरा प्रवीण खालिङ बाघचुलीबाट उदाएको यौटा प्रखर सूर्य अहिले अस्ताएको छ। घाम अस्ताइसकेर पनि त्यसको उज्यालोको न्यायो भने हिमालको सन्तानले बाचिञ्जेल गर्वबोध गरिरहनेछ। एउटा लिजेण्ड व्यक्तित्व अहिले इतिहास बनेको छ। हो, हिमालको सन्तानले आफ्नै माटोको […]
January 22, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
आफ्नो आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा “ म केही दिन हराउँदैछु” लेखिराखेपछि हिँडेको अहिलेसम्म राजधानीको यादै नआउँनु भनेको आधुनिक शहरबाट साँच्चै मान्छेको मन परास्त भइसकेको प्रमाण जस्तो भएर उभिन्छ। गाउँमा जन्मेर शहरमा हुर्किएपछि शहरैमा डेरा जमाउने युवा मनहरू अमेरिकाली योगी […]
प्रवीण खालिङ लामो समयदेखि विवादै विवादमा रहेको रूम्तेक धर्मचक्र परिसरमा चाना, बदाम र झालमुरी बेच्ने मुख्तार भाइले हातमा एक मुट्ठी चना र बदाम राखे पछि ‘ओम आँ हुँ बज्र गुरू पेमा सिद्धे हुँ’ गुनगुनाउँदै सड़क […]
December 30, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
भुइँकुरा प्रवीण खालिङ “हो! नी मेरो आपाले पनि यही बाटोमा जीवन शुरु गरेका थिए। मैले पनि त्यै गोरेटो हिँडदै यो बाटोसम्म आइपुगेको पनि 15 वर्ष लाग्यो। यही नै प्यारो लाग्छ। यसलाई छोडेर कतै जानु मनपर्दैन।” […]
भुइँकुरा प्रवीण खालिङ व्यापार न हो कसैलाई पनि बेचिदिन सक्नुपर्छ। चाहे अरूको भावना नै किन नहोस् मार्केटिङ गर्न सकियो भने सफल हुनसकिन्छ। जिन्दगीमा मान्छेले थौरै समय सायद बचाउने प्रयासमा बिताउँछन् तर धेरै समय र धेरैले […]
प्रवीण खालिङ-को भुइँकुरा : काँध र पाइतालाहरूका पक्षमा
December 21, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
भुइँकुरा प्रवीण खालिङ ‘उभिनकै निम्ति त होनी, जाबो उभिएपछि त कसरी अडिनुपर्छ त्यो हामीलाई राम्रो थाहा छ,’ भन्ने उसको मन्तव्यबारे हिमालले केही प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नै सकेन। अहिलेसम्म त्यो प्यारो कञ्चनजङ्घाको काखमा बसेर […]
प्रवीण खालिङ -को भुइँ कुरा
December 12, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
प्रवीण खालिङ “ पर्यटक महोदय, तिम्रो त्यो डिजिटल क्यामेराको फ्रेममा कञ्चनजङ्घाको उजेलो अनुहारमात्रै आयो कि उसको युगौदेखिको चिसेनी मन पनि पऱ्यो ?” टासी भ्युपोइन्टमा बिहानै पुगेर तातो चिया पिउँदै हिमालको सुन्दरतालाई पर्यटकले डिजिटलाइजेशन गरेपछि पनि त्यो हिमाल […]
December 6, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि 0
प्रवीण खालिङ “हो हिमाल! अब हामीले आफ्नै प्रकारले सोच्नै पर्छ। हाम्रो भावनालाई अहिलेसम्म सम्वेदनाको साङ्गलोले बाँधेर राखेको एक शताब्दि भइसक्यो। जहिले पनि कष्ट गरेर बोकेर कञ्चनजङ्घा भन्दा साह्रो पहाड़मा पुर्‍यायो। पुनः फेदीबाट यात्रा शुरु गर्नु […]
भुइँकुरा सपनाको गन्ध प्रवीण खालिङ अरूले खान नसक्ने कालो अक्षर खाएर नै उसको विचार यत्ति शक्तिशाली भएको हो। उ त हेर्दा बेक्कामे छ नी, समाजमा काम नालाग्ने भनेकै यिनीहरू हुन। यस्ताले समाजको विकासको गतिलाई […]
भुँइ कुरा /अलेकजाण्डर सिण्ड्रोम
भुइँकुरा प्रवीण खालिङ विजेताहरू सधैँ हार्नेहरूको हारको प्रतिफलको रूपमा रहेका हुन्छन्। उनीहरूको खुसी जहिले पनि हार्नेहरूको पीड़ामाथि कुदिएको हाँसो मात्र हो। हामी सधैं जित्नेको पक्षमा उभिएर उनीहरूले हार्नेहरूबाट लुटेका खुसीको छाकमा सरिक हुन रमाउने गर्छौं। […]
भुइँ कुरा जिन्को बायोलोबा र फोसिल सपना प्रवीण खालिङ आन्दोलनमा जीवन हारेर अमर बनेकाहरूको नाममा राखिएको पार्कमा। हिमालको सन्तानको सपना जस्तै पुरानो उभिएको यो रूखबारे पटक पटक विभिन्न लेख र चर्चाहरू पढिएको हो। पहाड़को […]
हिमालको सन्तान, कमरेड चे-लाई खुकुरी र समानताको प्रश्न
भुइँकुरा चेग्वेभारा अहिले जिउँदो हुँदा हुन् त खुकुरी बोक्ने हिमालको सन्तानको पीड़ाले सम्वेदनशील हुन्थे होलान्। एउटा बोलिभिया, एउटा अर्जेन्टिना र एउटा ल्याटिन अमेरिका भारतमा लड्नुपर्ने आह्वान गर्थे होलान्। अनि उनले थाहा पाउँथे होलान्, वीरलाई सम्मान […]